トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny mpanjifa fototra ny pachinko parlors
In pachinko parlors dia isan-karazany ny mpanjifa no tonga ny fivarotana. Tsy olona indraindray handeha hilalao, saingy mieritreritra aho fa tsy miraharaha anao loatra ny mpanjifa base, ao amin'ny pachinko efi-trano, matetika ny vehivavy fivarotana sy ny mpiasa birao matetika toeram-pivarotana, na, tanora lahy toy ny toeram-pivarotana, izay mandrafitra ny maro an'isa , dia miovaova arakaraka ny mpanjifa ihany koa ny base ny fivarotana.
pachinko efi-trano fa ny olona rehetra no mandeha hoe inona no fivarotana izany, mba hamantarana raha misy ny fahafahana avy, ka tandremo jereo kely ny mpanjifa fototra, dia nandresy mahagaga mety dia avo.
mety hieritreritra zavatra hita eo amin'ny mpanjifa fototra, fa amin'ny raharaha raha toa ka voafidy sehatra sitrana andian-tsoratra, arakaraka ny mpanjifa fototra, dia misy ihany koa ny dikany izany Fitsimbadihan-javatra lehibe teo amin'ny latabatra hetsika. Ao amin'ny fivarotana na mpanjifa fototra dia ny tanjona raha maso, ary avy eo amin'ny an-tsipiriany ny fanazavana.
koa aho, saingy mieritreritra aho fa misy mandre ny teny pachislot, inona ny olona iray Pachipuro, dia Raha vao jerena, fa izay tsy manaraka dia sarotra ny hamantatra. Toy ireo zavatra maro ho an'ny olona izay nanao Pachipuro sy semi-matihanina, misy maso ny antontan-kevitra tsaramaso kely. Ary ny andro izay tsy mazava tsara milalao, manana finday na kahie, dia tena mameno ny hizaha ny rakitra.
fitondran-tena io, fa tsy ny slingshot, miaraka amin'ny hetsika bebe kokoa ao amin'ny slot, tao anatin'ireo taona faramparany, dia toy ny lehilahy tanora mpanjifa na dia tsy matihanina, dia mety koa ho tanterahina mba handinika ny antontan-kevitra amin'ny manokana. Miteny ao amin'ny
pachinko, fijanonana daroka, sns, ny olona izay matetika ny mpanjifa ny hetsika ny somary hafa kely tanana, misy mety Pachipuro. Ao, pachinko parlors misy Pachipuro dia, ka ataovy hoe: raha ny pachinko parlors avy, tsy hoe categorically ho ny raharaha. Pachipuro hoe, mba handinika ny antontan-kevitra ny andro-to-andro tsena, dia tonga namely amin'ny Fahatakarana ny Hevitry ny fahazarana ny fivarotana.
mikendry ny manga-Chip biraom amin'ny teboka Pin, tokoa ny mitsidika.
Pachipuro zava-misy fa ny ankehitriny hoe handresy mety haharitra izy, fa dia ny hoe misy, ao an-Pin-teboka tsy ho eo amin'ny am-polony venty, toy ny tsy maintsy ataoko tanjona, toeram-pivarotana kely latabatra tsara, mora mandresy amin'ny tsy matihanina Mba mieritreritra zavatra sarotra .
Pachipuro zavatra fa tsy mitovy handresy mora ny toeram-pivarotana. Pachipuro, satria dia ny fandikan-teny mba mivelona amin'ny pachinko ny fidiram-bola, dia nandeha ho any toy izany, 's ny tantara azo ho matihanina. Professional noho mikendry ny fivarotana misy, ary mikendry ny fivarotana isan-karazany clientele manangona, dia ny mety ho handresy amin'ny mifamadika dia avo.
amin'ny fivarotana na mpanjifa fototra dia, niteny ny tsara ny Miseka, ary ny mpanjifa izay milalao ny tsy mahalala be pachinko, toy ny olona izay efa voafetra ny fotoana, ary misy isan-karazany ny olona, ??free avo-tsara mijoroa ao amin'ny mifanohitra izany dia ho mora kokoa. Ny zava-misy fa ny mpanjifa fototry ny tsy manam-petra toy izany dia manangona isan-karazany dia ny hoe misy ny mety fa misy plurality tsara koa ny latabatra.
na iza na iza no tsy mandeha ihany indraindray, dia mety ho tena tsara rehefa mifidy ny fivarotana ny mahita ny mpanjifa fototra. Raha niresaka ny pachinko, mijanona afa-tsy ny olona maro any maso ny mifidy, ny fandinihana manodidina tsara, miezaka kokoa lafiny ady feno hafetsena.